किन अमेरिकी कम्पनी युट्युब टप चर्चामा ? «
किन अमेरिकी कम्पनी युट्युब टप चर्चामा ?
प्रकाशित मिति : २४ बैशाख २०७६, मंगलवार २२:५८
हरेक दिन २ सय करोडभन्दा बढी मानिसले युट्युब लगइन गर्ने गरेका छन् । गुगलका सिईओ सुन्दर पिचईले न्यूयोर्कमा भएको एक कार्यक्रममा यसबारे जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा प्रयोगकर्ताको संख्या १ सय ८० करोडबाट बढेर २ सय करोड पुगेको छ ।
गुगलको पेटेन्ट कम्पनी अल्फाबेटको शेयर मूल्यमा गिरावट भइरहेको समयमा युट्युबबारेको यो तथ्य बाहिर ल्याइएको छ । अल्फाबेट युट्युबको शेयर होल्डर कम्पनी हो । अल्फाबेटको शेयर मूल्यमा गिरावट आउन थालेपछि युट्युबको प्रयोगकर्तालाई देखाएर लगानीकर्ताहरुको ध्यान तान्न यसो गरिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
पछिल्लो केही समययता युट्युबमा क्लिक गर्नेको संख्यामा कमी आएको कम्पनीका फाइनान्सियल चिफ अफिसरले बताएका छन् । युट्युबमा हुने क्लिक उसको आर्थिक संकलनको मूख्य स्रोत हो । गत वर्ष थुप्रै ठूला ब्राण्ड कम्पनीले युट्युबलाई विज्ञापन दिन बन्द गरेको थियो ।
युट्युबले गलत तथा आपत्तिजनक भिडियो सामग्रीका साथ आफ्नो विज्ञापनलाई स्थान दिएको भन्दै ठूला विज्ञापन कम्पनीदाताहरुले विज्ञापन दिन बन्द गरेका थिए । युट्युब प्रयोगकर्ताले मनोरञ्जनमात्रै नभइ यसबाट विभिन्न जानकारी तथा शिक्षा पनि लिन सक्ने अवस्था रहेको युट्युबको दावी छ । यद्यपि, युट्युबले अझै पनि अनुचित भिडियोहरुलाई हटाउन कार्यमा संघर्ष गरिरहेको छ ।
युट्युब अहिले अनुसन्धानको क्रममा रहेको छ । आपत्तिजनक भिडियो सामग्री हटाउने कार्यमा जुटिरहेपनि उसले सफलता हात पार्न सकेको छैन । आफ्नो नियममाथि सख्त कडाई गरिरहेको युट्युबले विज्ञापनदाता तथा लगानीकर्ताको दबाब त्यतिकै झेलिरहेको छ ।
विज्ञापनबाट हुने आम्दानी गुगलको मुख्य आय स्रोत हो । पछिल्लो समयमा विज्ञापनका लागि युट्युबले अमेजन तथा फ्लिपकार्ट जस्ता कम्पनीसँग पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहनु परेको छ ।